Kufambisa Kwako Maziso Pawebsite | Martech Zone
Chipiri, August 5, 2014 Chishanu, February 10, 2017 Douglas Karr
Kune vakasika, ndine chokwadi kuti pane mumwe munhu mukati anovapopotera kuti vave vakasiyana uye vadzivise kuvaka webhusaiti inotaridzika uye inoita sevamwe vese. Kubva pakuona kwekushambadzira, zvakadaro, isu takadzidzisa vashanyi vedu pamusoro pemakore gumi ikozvino nezve izvo zvekutarisira pane webhusaiti uye maitiro ekufambisa imwe zvinobudirira. Sewe mushandisi, hapana chinhu chinogumbura sekuyedza kutsvaga ruzivo rwekuonana, tinya kumashure kune peji reimba, kana tarisa peji racho nyore kana risina kugadzirwa zvinoenderana netsika dzazvino.
Mune infographic pazasi, Singlegrain yakabatana neCrazy Egg kupa ruzivo runobatsira pakutevera maziso uko kunogona kukubatsira kunatsiridza ruzivo rwevashandisi pawebhusaiti yako.
Kugadzirisa dhizaini kwawedzera kune kuomarara uku - kuverengera kuti vagadziri vanogadzira zvakanaka magiraidhi pese pekutarisisa uye vanopa kudyidzana kungori chigunwe chekumusoro kure! Izvo zvinoda mamwe akanyatsofungidzirwa mapeji ari nyore kupururudza, tsvaga zvaunoda, uye uverenge uye uzvichengete.
Mugadziri wako anogona kuyedzwa kuti aite chimwe chinhu chakatosiyana ... asi usashamisike kana izvo zvikanganisa bounce mitengo uye shanduko sevashanyi vanoora moyo vobva!
Tags: zai rinopengakufamba kwezisokutevera kwezisoFmafambiro anoita maziso akowirirana patanisinglegrainwebhusaiti f
Iyo Yakasarudzika Webhu Native Kushambadzira Kuchawacha